Profaịlụ ụlọ ọrụ - Weifang Dehua New Polymer Material Co., Ltd.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Weifang Dehua New Polymer Material Co., Ltd e guzobere na 1999 afọ, nke bụ nnukwu ọkachamara kemịkalụ factory na elu àgwà akara ọkọlọtọ usoro na kwadoro akwụkwọ nke ISO 9001 na 2002.Ụlọ ọrụ nyocha na ndị otu njikwa na ụlọ nyocha ga-enyere aka imezu ihe ndị ahịa ọ bụla chọrọ n'ụzọ ziri ezi na ngwa ngwa.
Echiche njikwa anyị
Inye kemịkalụ dị elu na mgbanaka ndụ ndụ na ndụ anyị maka ndị ahịa anyị na-akpata eziokwu bụ okpuru ulo nke otu ụlọ ọrụ.Dehua na-elekwasị anya ọ bụghị naanị n'ahịa dị n'ụgbọ ma ọ bụ mba ụwa.
Ogo bụ nchụso na-adịgide adịgide nke Dehua, ọrụ nkọwa na nyocha nyocha ga-egosi nke ọma maka ndị ahịa anyị ọ bụla.Site n'ịmụ tiori na teknụzụ dị elu ga-enyere anyị aka imeziwanye ọkwa teknụzụ na ihe ọhụrụ anyị.
Maka ime mgbanwe na gburugburu ahịa asọmpi yana imezu ihe ndị ahịa anyị chọrọ, anyị ejirila ọtụtụ mahadum na ụlọ ọrụ nyocha ụlọ ọrụ emelite kemịkalụ anyị n'oge.Ebupụla rọba chlorinated nke Aqueous na-emepụta n'ihe karịrị mba 30 gburugburu ụwa ma na-eji ya eme ihe maka agba mmiri, agba mgbochi corrosion na agba akara okporo ụzọ, eserese ndu ọdụ ụgbọ elu wdg.
Ọpụrụiche na ngwaahịa kemịkalụ dị ka ndị a
The PVC Stablizers, CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride), HCPE (Elu Chlorinated Polyethlene), CPE (Chlorinated Polyethylene), CR (Chlorinated Rubber), Acrylic Processing Aid (ACR) , Acrylic Impact Modifier (AIM), AS Resin TR869 Elastomer(SPUA) , Metallic paint emulsion, Glass Paint Emulsion, Wood lacquer Emulsion, Plastic and Rubber Paint Emulsion, Elastic Anti Collision Material, Metal Structure Anticorrosion Material, Elastic Waterproof Material, Quick Reactive Spray Polyurea Floor Material.
Echiche Chemistry Green anyị
Nke ọ bụla n'ime usoro ndị a dị n'elu nwere ọtụtụ akara ule na-adabere na ndị ahịa dị iche iche ma nwee ike iji ya mee ihe na ink na ihe ndị ọzọ, usoro nkwusioru nke aqueous chlorinated adịghị emerụ ma ọdịdị na gburugburu ebe obibi. carbon tetrachloride , trichloromethane na dichloromethane .Ya mere, usoro a adịghị emebi ozone oyi akwa na ikuku .Nke a teknụzụ na-atụ aro site na Montreal International Pact of Environmental Protection na bụ otu n'ime ndị na-eduga usoro na ụwa . Site na mbọ anyị, ịdị mma nke kemịkalụ anyị na-eji nke nta nke nta karịa ngwaahịa ọdịnala site na ụzọ mgbaze, yana oke arụmọrụ-ọnụahịa karịa.
Ime ọganihu na ihe ọhụrụ na nyocha ngwaahịa ọhụrụ maka gburugburu ebe obibi enyi na enyi na ndụ obodo ndụ ndụ bụ ebumnuche anyị maka ogologo oge.